Caawin hel - BullyingCanada
[emailka waa la ilaaliyay]beentaCanada.ca
/ Hel Caawin
Call BullyingCanada Hadda
Kooxdayada oo ka badan 350 tabaruceyaal aad u tababaran ayaa halkan u jooga kaliya inay caawiyaan dadka adiga oo kale ah. Kaliya soo qaado taleefankaaga oo garaac:
oo raac tilmaamaha si aad u gasho Kooxda Taageerada!
Ha xishoon, waan kuu joognaa adiga.
Runtii waa wax iska caadi ah in aad wax ka ogaato adeegyadayada, laakiin fadlan xasuusnoow waxaan u baahanahay inaan hubinno inaan diyaar u nahay inaan u adeegno kuwa baahan.
Ma garanaysid waxa la yidhaahdo? Ha werwerin! Saaxiibadayada Virtual waa saaxiibtinimo oo si fiican loo tababaray - waxay heli doonaan wada hadalka oo ay wataan dhawr su'aalood.
Doorbida Qoraal ama iimaylka?
Noo soo dir mar kasta! Kaliya u dir fariin SMS:
ama waxaad iimayl ugu diri kartaa Kooxdayada Taageerada 24/7/365 at:
Waa maxay cagajuglaynta?
Maxaa la qaban karaa?
Carruur badan ayaa fikrad fiican ka haysta waxa ay tahay cagajuglaynta sababtoo ah waxay arkaan maalin kasta! Cagajuglayntu waxay dhacdaa marka uu qof dhaawaco ama u baqo qof kale si ula kac ah oo qofka loo cagajugleeyo ay ku adag tahay inuu naftiisa difaaco. Marka, qof kastaa wuxuu u baahan yahay inuu ka qaybqaato si uu u caawiyo joojinta.
Xoogsheegashadu waa khalad! Waa hab-dhaqanka ka dhigaya qofka la xoogsheegtay inuu dareemo cabsi ama raaxo darro. Waxaa jira siyaabo badan oo ay dhallinyaradu isu caayaan, xitaa haddii aysan markaas garaneynin.
Feer, tuurasho iyo falal kale oo dadka dhaawac u geysta
In dadka laga faafiyo warar xunxun
Ka ilaalinta dadka gaar ah koox
Dadka oo si xun loogu jeesjeesay
Ku kasbashada dadka qaarkood inay "burcad" ku sameeyaan dadka kale
Waa maxay noocyada caanka ah ee cagajuglaynta?
U cagajugleynta afka ah - magac-sheegid, jeesjees, jeesjees, faafinta xanta, hanjabaada, samaynta tixraacyo xun ee qofka dhaqankiisa, qowmiyadiisa, jinsigiisa, diintiisa, lab iyo dhedig, nooca galmada, faallooyinka galmada ee aan la rabin.
Bullying Bullying – mooryaan, aflagaaddo, ka saarida kuwa kale koox, ku ceebaynta kuwa kale tilmaamo dadweyne ama qoraalo loogu talagalay in dadka kale hoos loo dhigo.
Xoog u sheegashada Jirka - garaacid, turub, qanjaruufo, cayrsi, cayr, qasbid, burburinta ama xado alaabta, taabashada galmada aan la rabin.
Cagajugleynta Cyber-ka - adeegsiga internet-ka ama fariimaha qoraalka ah si aad u cabsi geliso, u dejiso, u faafiso wararka xanta ah ama qof loogaga qoslo.
Maxay yihiin qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee cagajuglaynta?
Cagajuglayntu dadka way ka xumaadaan. Waxay ka dhigi kartaa carruurta inay dareemaan cidlo, faraxsanayn iyo cabsi. Waxay ka dhigi kartaa inay dareemaan ammaan darro oo ay u maleeyaan inay tahay inay wax ka khaldan yihiin iyaga. Carruurtu waxay lumin karaan kalsoonida waxaana laga yaabaa inaysan rabin inay dugsiga aado. Waxaa laga yaabaa inay xitaa xanuunsato.
Dadka qaar ayaa u haysta in cagajuglaynta ay tahay qayb ka mid ah korriinka iyo hab ay dhallinyaradu ku bartaan inay naftooda u adkeystaan. Laakin cagajuglaynta waxay yeelan kartaa cawaaqib jireed iyo mid maskaxeed oo fog. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Ka-noqoshada qoyska iyo hawlaha dugsiga, iyaga oo doonaya in cidla looga tago.
Haddi aan la joojin cagajuglaynta, waxa ay sidoo kale dhib u geysataa kuwa taagan, iyo sidoo kale qofka xoog u sheega dadka kale. Dadka ag jooga waxay ka baqayaan inay noqdaan dhibbanaha xiga. Xataa haddii ay si xun u dareemaan qofka loo xoogsheegtay, way iska ilaaliyaan inay ku lug yeeshaan si ay isu badbaadiyaan ama sababta oo ah ma garanayaan waxay samaynayaan.
Carruurta barata inay ka bixi karaan gacan-ka-hadal iyo gardarro waxay sii wadaan inay sidaas sameeyaan markay weynaadaan. Waxay haystaan ​​fursad sare oo ay ku lug yeeshaan gardarrada shukaansiga, dhibaataynta galmada, iyo dhaqanka dembiyada nolosha dambe.
Xoogsheegashadu waxay saamayn ku yeelan kartaa waxbarashada
Cadaadiska iyo werwerka ay sababto cagajuglaynta iyo dhibaataynta waxay ku adkayn kartaa carruurta inay wax bartaan. Waxay keeni kartaa dhibaato xagga fiirsashada waxayna hoos u dhigtaa awooddooda inay diiradda saaraan, taasoo saamaynaysa awoodda ay u leeyihiin inay xusuustaan ​​waxyaabaha ay barteen.
U cagajuglaynta waxay u horseedi kartaa walaac aad u daran
Cagajuglayntu waa xanuun iyo ceebayn, carruurta la xoogsheegtana waxay dareemaan xishood, garaacid iyo ceeb. Haddii xanuunka aan laga bogsanin, cagajuglaynta waxay xitaa keeni kartaa in la tixgeliyo is-dilka ama dhaqanka rabshadaha.
Sidee bay u badan tahay cagajuglaynta?
Kanada, ugu yaraan 1 ka mid ah 3dii arday ee qaan-gaarka ah ayaa sheegay in la caayo. Ku dhawaad ​​kala bar waalidiinta Kanada ayaa sheegay inay dhaleen ilmo dhibbanaha u ah cagajuglaynta. Daraasaduhu waxay ogaadeen in cagajuglaynta ay ku dhacdo todobadii daqiqiba hal mar garoonka ciyaarta iyo hal mar 25kii daqiqo ee fasalka.
Inta badan, cagajuglaynta waxay ku joogsanaysaa 10 ilbiriqsi gudahood marka asxaabta ay soo farageliyaan, ama aysan taageerin habdhaqanka cagajuglaynta.
Maxaan hadda ka samayn karaa cagajuglaynta beeshayda dhexdeeda?
Marka hore, xasuuso inaan halkan kuu joogno 24/7/365. Noogula sheekee si toos ah, noo soo dir warqad email, ama na sii giraanta 1-877-352-4497.
Taasi waxay tidhi, halkan waxaa ah dhawr tallaabo oo la taaban karo oo aad qaadi karto:
U sheeg qof aad ku kalsoon tahay - macalin, tababare, lataliye, waalid
U sheeg wax u bogaadiya cagajuglaynta si isaga/iyada uga mashquulo
Koox koox u joog si aad uga fogaato iska hor imaad
Isticmaal kaftan si aad iskaga tuurto ama aad ula xidhiidho xoogsheegahaaga
Iska dhig in qofka xoog u xoogsheegtay aanu ku saamaynaynin
Xusuusnow inaad tahay qof wanaagsan oo mudan in la ixtiraamo
Loogu talo galay dadka goob jooga:
Halkii aad iska indho tiri lahayd dhacdo xoogsheegasho, isku day:
U sheeg macalinka, macalinka ama la taliyaha
U dhaqaaq dhinaca ama u dhow dhibbanaha
Isticmaal codkaaga - dheh "jooji"
La saaxiib dhibbanaha
U kaxee dhibbanaha xaalada
Loogu talagalay cagajuglaynta:
La hadal macalin ama la taliye
Ka fakar sida aad dareemi lahayd haddii qof ku caayo
Ka fiirso dareenka dhibbanahaaga – ka fakar ka hor intaadan ficil samayn
Maxay yihiin qaar ka mid ah tirokoobyada muhiimka ah ee laga ogaanayo cagajuglaynta?
Kanada waxay leedahay 9-aad heerka ugu sarreeya ee cagajuglaynta ee qaybta 13-jirka ee qiyaasta 35 waddan. 
Ugu yaraan 1 ka mid ah 3dii arday ee qaan-gaarka ah ee Kanada ayaa sheegay in dhawaan la handaday. 
Dadka waaweyn ee Kanadiyaanka ah, 38% ragga iyo 30% dumarka ayaa sheegay inay la kulmeen cagajugleyn joogto ah oo marmar ama sannad dugsiyeedka ah. 
47% ka mid ah waalidiinta Kanadiyaanka ah ayaa sheegay in ay ilmo qabaan dhibane cagajugleyn. 
Ka-qaybgal kasta oo cagajuglaynta waxay kordhisaa khatarta fikradaha is-dilka ee dhalinyarada. 
Heerka takoorka lagu sameeyay ardayda loo aqoonsaday inay yihiin Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-identified, Two-Spirited, Queer ama Su'aalo (LGBTQ) ayaa saddex jeer ka badan dhalinyarada isku jinsiga ah. 
Gabdhaha waxay u badan tahay in lagu caayo internetka marka loo eego wiilasha. 
7% dadka qaangaarka ah ee isticmaala internetka Kanada, da'doodu tahay 18 jir iyo ka weyn, ayaa iskood u sheegay inay dhibane u tahay cagajuglaynta internetka mar noloshooda ka mid ah. 
Nooca ugu badan ee cagajuglaynta interneedku waxay ku lug leedahay helista iimaylo hanjabaad ama gardarro ah ama fariimo degdeg ah, oo ay soo warrameen 73% dhibbanayaasha. 
40% shaqaalaha Kanada ayaa la kulma cagajuglaynta toddobaad kasta. 
Golaha Waxbarashada Kanada – U xoogsheegashada Kanada: sida cabsigelintu u saamayso waxbarashada
Molcho M., Craig W., Due P., Pickett W., Harel-fisch Y., Overpeck, M., iyo Kooxda Qorista Xoogsheegashada ee HBSC. Isbeddellada waqti-qaran ee hab-dhaqanka cagajuglaynta 1994-2006: natiijooyinka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Joornaalka Caalamiga ah ee Caafimaadka Dadweynaha. 2009, 54 (S2): 225-234
Kim YS, iyo heerka B. cagajugleynta iyo isdilka. Dib u eegis Joornaalka Caalamiga ah ee Daawada Dhalinyarada iyo Caafimaadka. 2008, 20 (2): 133-154
Cagajugleynta Xorta ah Alberta - Xoogsheegashada Khaniisnimada
Statistics Canada - cagajuglaynta internetka iyo soo jiidashada carruurta iyo dhalinyarada
Tirakoobka Kanada – Dhibbanaha intarneetka ee is-ka warbixiyey ee Kanada
Lee RT, iyo Brotheridge CM "Marka uu ugaadhsigu isu beddelo ugaarsi: Xoogsheegashada goobta shaqada sida saadaaliya ka-horjeedka/ cagajuglaynta, laqabsiga, iyo fayoobaanta". Joornaalka Yurub ee Shaqada iyo Cilmi-nafsiga Ururka. 2006, 00 (0): 1-26
Maxay yihiin khuraafaadka caanka ah ee ku saabsan cagajuglaynta?
Khayaali #1 - "Carruurtu waa inay bartaan inay naftooda u istaagaan."
Xaqiiqda – Carruurta ku dhiirata inay ka cawdaan in la caga jugleeyo ayaa sheegaya inay isku dayeen oo aysan iskood ula qabsan karin xaaladda. Ula dhaqan cabashooyinkooda sidii baaq gargaar ah. Ka sokow bixinta taageerada, waxa ay noqon kartaa mid waxtar leh in carruurta la siiyo tababbarka xallinta mashaakilaadka iyo tababbarka caddaynta si looga caawiyo la tacaalidda xaaladaha adag.
Khayaali #2 - "Carruurtu waa inay dib u garaacaan - kaliya waa inay ka sii adag yihiin."
Xaqiiqda - Tani waxay keeni kartaa dhaawac halis ah. Dadka xoog u sheega inta badan way ka weyn yihiin kana awood badan yihiin dhibanayaasha. Tani waxay sidoo kale siinaysaa carruurta fikradda ah in rabshadu ay tahay hab sharci ah oo lagu xalliyo dhibaatooyinka. Carruurtu waxay bartaan sida loo xoogsheegto iyagoo eegaya dadka waaweyn oo awooddooda u isticmaalaya gardarada. Dadka waaweyni waxa ay fursad u helaan in ay tusaale fiican u noqdaan iyaga oo baraya carruurta sida loo xalliyo mashaakilaadka iyaga oo u isticmaalaya awooddooda siyaabo ku habboon.
Khayaali #3 - "Waxay dhistaa dabeecad."
Xaqiiqda – Carruurta si isdaba joog ah loo cagajugleeyo, isku kalsoonaantoodu hooseyso mana aaminaan kuwa kale. Xoogsheegashadu waxay dhaawacdaa fikradda qofka.
Khayaali #4 - "Usha iyo dhagxaantu waxay jebin karaan lafahaaga laakiin erayadu waligood wax kuma yeeli karaan."
Xaqiiqda - Nabarrada ay ka tagaan magac-u-sheegiddu waxay socon karaan inta ay nool yihiin.
Khayaali #5 - "Taasi maaha cagajugleyn. Way ku jeesjeesayaan.
Xaqiiqda – jeesjeeska xun waa dhaawac waana in la joojiyo.
Khayaali #6 - "Weligood waxaa jiray cagajugleyn waligeedna way jiri doonaan."
Xaqiiqda – Anagoo wada shaqaynayna waalid ahaan, macalimiin iyo ardayba waxaan awood u leenahay inaan wax ka bedelno oo aan mustaqbal wanaagsan u abuurno caruurteena. Khabiir hormuud ah, Shelley Hymel, ayaa leh, "Waxay u baahan tahay ummad dhan inay beddelaan dhaqan". Aan ka wada shaqayno si aan u bedelno fikradaha ku saabsan cagajuglaynta. Ka dib oo dhan, cagajuglaynta maaha arrin edbin ah - waa wakhti waxbarid.
Khayaaliga #7 - "Carruurtu waxay ahaan doonaan carruur."
Xaqiiqda – Xoogsheegashadu waa dhaqan la bartay. Carruurtu waxa laga yaabaa inay ku dayanayaan hab-dhaqan qallafsan oo ay ka arkeen telefishanka, filimada ama guriga. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in 93% ciyaaraha fiidyaha ay abaal-marinayaan dhaqanka rabshadaha. Natiijooyin dheeri ah ayaa muujinaya in 25% wiilasha da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 17 ay si joogto ah u booqdaan gore oo ay neceb yihiin baraha internetka, laakiin fasallada aqoonta saxaafaddu waxay hoos u dhigtay aragtida wiilasha ee rabshadaha, iyo sidoo kale falalka rabshadaha ah ee ay ka geystaan ​​goobta ciyaarta. Waa muhiim in dadka waaweyn ay warbaahinta kala hadlaan rabshadaha dhalinyarada, si ay u bartaan sida loo ilaaliyo macnaha guud. Waxaa loo baahan yahay in diiradda la saaro beddelka mawqifyada rabshadaha.
Source: Dowladda Alberta
Sideen ugu tabaruci karaa?
Haddii aad xiisaynayso inaad iskaa wax u qabso kula shaqeyso BullyingCanada, waxaad wax badan ka baran kartaa annaga Hel ka qayb iyo Noqo mutadawiciin boggaga.
Waxaan had iyo jeer raadineynaa shaqsiyaad xamaasad leh, dhiirigelin leh, oo heegan u ah inay naga caawiyaan joojinta dhallinta nugul ee cagajuglaynta.